Umngundo uyahlangabezana neemfuno zenkqubo yokusebenza
Ukuveliswa komngundo ngokubanzi kubandakanya iinkqubo ezininzi ezinje ngokuqinisa, ukusika kunye nonyango lobushushu. Ukuqinisekisa umgangatho wokuveliswa komngundo kunye nokunciphisa iindleko zemveliso, izinto kufuneka zibe nokuqamba okuhle, ukungabinamandla, ukuba lukhuni, i-harde ...
Imigaqo emithandathu yoKhetho loMngundo
1. Nxiba ukuxhathisa Xa into engenanto igungxulwe ngeplastikhi kumngxunya wokungunda, iyahamba kwaye ityibilika kumphezulu womngxuma, ibangele ukungavisisani phakathi kobuso bendawo leyo kunye nokungabinanto, nto leyo ebangela ukungunda kungasebenzi ngenxa yokunxiba. Ke ngoko, ukunxiba res ...
Umenzi wezithuthi e China
I-Aojie inayo imveliso yokuqhubela phambili kunye nolawulo lomgangatho ogqibeleleyo. Le nkampani umthengisi yobungcali izahlulo auto eTshayina, isebenzisa inkqubo CAD / CAM / CAE zehlabathi; Zonke iinkcukacha kwinethiwekhi yendawo zinokutshintshiselana kwaye kwabelwane ngazo; yenza ukungunda nge-CNC m ...
Imigangatho emithathu yezixhobo zokukhetha uMngundo
(1) Ukuxhathisa umhlwa Xa ezinye izinto zomngundo ezinje ngomngundo weplastikhi zisebenza, ngenxa yobukho bechlorine, ifluorine kunye nezinye izinto kwiiplastikhi, iigesi ezomeleleyo ezinje nge-hci kunye ne-hf ziya kusonjululwa emva kokufudunyezwa, okuza kubangela umphezulu yemol ...
1. Nxiba ukuxhathisa Xa into engenanto igungxulwe ngeplastikhi kumngxunya wokungunda, iyahamba kwaye ityibilika kumphezulu womngxuma, ibangele ukungavisisani phakathi kobuso bendawo leyo kunye nokungabinanto, nto leyo ebangela ukungunda kungasebenzi ngenxa yokunxiba. Ke ngoko, ukunxiba kwakhona ...